DMC-TZ110GA Lumix Digital Camera - Panasonic
LUMIX Digital Camera DMC-TZ110GA
လွတ်လပ်ခြင်းရဲ့ ခံစားမှုလိုမျိုး ကောင်းမွန်တဲ့အရာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ သင်လှုပ်ရှားသလို လိုက်လှုပ်ရှားသည့် ကင်မရာတစ်ခုနှင့် ကမ္ဘာကြီးကို စူးစမ်းလေ့လာပြီး အခိုက်အတန့်တိုင်းကို ရိုက်လိုက်ပါ။ တိုးတက်မှုများ ခြေလှမ်းစိပ်စိပ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ မြို့တွင်းမှာအနားယူနေသည်ဖြစ်စေ သဘာဝတရားကို ခံစားနေသည်ဖြစ်စေ ကြီးမားသော 1 လက်မအရွယ် အာရုံခံနိုင်စွမ်းမြင့်မားသည့် MOS Sensor နှင့် အားကောင်းသော 10x zoom ဖြင့် ခရီးသွားလာသည့်အခိုက်အတန့်များအား တစ်သက်တာတည့်တံ့စေရန် ထိန်းသိမ်းရာတွင် မည်သည့်အခါမှ ဤမျှလောက်မလွယ်ကူခဲ့ဖူးတာ တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သေးငယ်သော အရွယ်အစား၊ ကြီးမားသော စွန့်စားခန်းများ
LUMIX TZ110 အား စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် function ပြည့်စုံသောဟန်ချက်ညီမျှဖြင့် တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ခရစ်စတယ်တစ်မျှညီမျှသော LEICA zoom lens သည် စတိုင်ကျသော အိတ်ကပ်အရွယ်အစားရှိသော ပုံစံနှင့် တွဲဖက်ထားပါသည်။ အရွယ်အစားကြီးမားသော ကင်မရာအိတ် သို့မဟုတ် အလေးစီးသော ကိရိယာများမလိုအပ်တော့ပါ။ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် သယ်ရောင်ရလွယ်ကူမှုများ ပြည့်စုံစွာဟန်ချက်ညီမျှစွာ ရှိနေပါပြီ။
နေ့ရောညပါ ရိုက်ကူးပါ – 1 လက်မအရွယ် ကြီးမားသည့် High Sensitivity MOS Sensor
နေကျသွားတဲ့အချိန်မှာ သင့်ကင်မရာကို အသုံးပြုလို့မရတော့တာမျိုး မဖြစ်တော့ပါဘူး။ TZ110 ၏ အားကောင်းသော 1-လက်မ 20.1-megapixel MOS sensor ဖြင့် ညဖက်မှာလည်း ဓာတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးလိုက်ပါ။ အလင်းရောင်နည်းသည့်အချိန်မှာပင် ပိုမိုအသေးစိတ်ရိုက်ကူးနိုင်မှု၊ အရောင်ပိုမိုတောက်ပမှုနှင့် ပိုမိုပြတ်သားမှု
Image Processor Venus Engine အသစ်
LUMIX TZ110 ကို LUMIX တန်ဖိုးကြီး ကင်မရာများကဲ့သို့ပင် တူညီသည့် Venus Engine ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးထားပါသည်။ ၎င်းသည် အရည်အသွေးမြင့် ရုပ်ပုံ ရိုက်ကူးမှုများနှင့် 4K ဗီဒီယို မှတ်တမ်းတင်မှုအတွက် လိုအပ်သည့် မြန်နှုန်းမြင့် ဆစ်ဂနယ် လုပ်ဆောင်ချက်များကို စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ LUMIX TZ110 ၏ အဆင့်မြင့် ဆူညံသံ လျှော့ချရေး စနစ်များသည် အမြင့်မားဆုံး ရိုက်ကူးနိုင်စွမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။
ISO12800 / Extended ISO25600. ရုပ်ပုံ အရည်အသွေး ပိုမို မြင့်မားစေရန် Sensitivity, gradation performance, resolution နှင့် colour reproduction တို့ကို တိုးမြှင့်ပေးထားပါသည်။
ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့် ရိုက်ချက်များသည် သင်ထင်ထားသည့်အတိုင်း နီးကပ်လာပါပြီ – Powerful 10x optical zoom
သင်သည် ပိုမို မနီးကပ်နိုင်သည့်အခါ LUMIX TZ110 ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့် 10x optical zoom က သင်ရိုက်ကူးလိုသည်ကို ရရှိနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။ ကမ္ဘာ့ နာမည်ကျော် LEICA DC VARIO-ELMARIT မှန်ဘီလူးများသည် ၎င်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့် ဇူးမ်များဖြင့် 25mm-250mm (35mm camera equiv.)မှစ၍ ချိန်ညှိလွယ်စွာဖြင့် ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပါသည်။ မြင်ကွင်းများကို အနီး အဝေး နှစ်မျိုးစလုံး ရိုက်ကူးနိုင်ရန်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသည့် အရာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
ယခု ရိုက်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည် ချိန်ညှိနိုင်သည့် – Post Focus
သင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသည့် နောက်တွင်ပင် focus ထဲသို့ ထည့်လိုသည့် အရာအား အတိအကျဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်း အခြေအနေကို စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ပါ။ LUMIX TZ110 တွင်ပါဝင်သော Post Focus function သည် သင့်အား ထိုသို့လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။ ရှုခင်းများကို ပုံမှန်အတိုင်း ရိုက်ကူးကာ ပြန်လည်ကြည့်ရှုပြီး ရှင်းလင်း ပြတ်သားလိုသည့် အပိုင်းကို 4K PHOTO ဖြင့် ပြင်လိုက်ပါ။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် ရိုးရှင်း၊ အံ့အားသင့်စရာကောင်းပြီးတော့ LUMIX TZ110 အတွင်းမှာပင် ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
4K ဗီဒီယို အစွမ်းဖြင့် TZ110 သည် သင့်မှတ်တမ်းတင်လိုသည်များကို Full HD အရည်အသွေးဖြစ်သည့် 3840 x 2160 pixel - 4x ထိ မှတ်တမ်းတင်ပေးနိုင်ပါသည်။ တစ်ဖန်ပြီးတစ်ဖန် ပြန်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ ပိုမိုအသေးစိတ်မှုနှင့် ပို၍ပင်များပြားသော အမှတ်တရများ
TZ110 တွင် ပါရှိသည့် 4K နည်းပညာကြောင့် 4K PHOTO သည် 30fps ဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသည့် အမှတ်ရဖွယ် ဓာတ်ပုံများကို ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပြီး ရိုက်ကူးပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း အကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံများကို ပြန်လည် ရွေးချယ်နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါသည်။ိရိုက်ပါ၊ ရွေးချယ်ပြီး သိမ်းဆည်းပါ။ LUMIX TZ110 တွင် ရှိသော 4K PHOTO အနေအထားဖြင့် အခိုက်အတန့်များကို မလွဲချော်အောင် ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
တိကျလွန်းသည့် LVF ဖြင့် အရာအားလုံးကို မြင်ကြည့်လိုက်ပါ
တစ်ခါတစ်ရံ နေရောင်ခြည်ပြင်းထန်လွန်းခြင်းက အတောက်ပဆုံးကင်မရာများကိုပင် မြင်ရခက်စေပါသည်။ LUMIX TZ110 သည် အလိုအလျောက် ဖွင့်ထားသည့်အခါ ကင်မရာမှ ကြည့်လိုက်သည်နှင့် သင်ရှာဖွေနေသော မြင်ကွင်းများကို ရိုက်ကူးနိုင်ရန်နှင့် အသေးစိတ်ကျကျ မြင်နိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်သော 0.2 လက်မ 1,166K-dot LVF (Live View Finder) လုပ်ဆောင်ချက် ပါရှိပါသည်။
ကင်မရာများတွင် RAW အချက်အလက်များ တိုးတက်မှု
LUMIX TZ110 သည် အောက်ပါ ဆက်တင်များကို ချိန်ညှိရန်အတွက် ကင်မရာအတွင်းတွင် RAW-format ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ Colour Space Setting (sRGB / AdobeRGB), White Balance, Exposure Compensation, Photo Style, Intelligent D-range Control, Contrast, Highlight / Shadow, Saturation, Noise Reduction, Intelligent Resolution, Sharpness.
Panasonic ၏ Depth From Defocus (DFD) Auto Focus (AF) နည်းပညာသည် frame အတွင်းရှိ အရာဝတ္ထုများကြား အကွာအဝေးကို ချက်ချင်းတွက်ချက်ပြီး lens ၏ focus အား လျှင်မြန်သည့် ဆက်တိုက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတည်းဖြင့် ရရှိစေနိုင်ပါသည်။ ၄င်းသည် အထိရှိသည့် ပိုမိုလျှင်မြန်သော AF အမြန်နှုန်းနှင့် AFC6fps ရှိသော ဆက်တိုက်ရိုက်ကူးသည့် အမြန်နှုန်းကို ရရှိစေပါသည်။ ၄င်းသည် ဗီဒီယို ရိုက်ကူးစဉ်တွင်လည်း ဆက်တိုက် focus ပြုလုပ်ခြင်း၏ တည်ငြိမ်မှုကို တိုးမြှင့်စေပါသည်။
အလင်းရောင်နည်းသော AF အား လရောင်အောက်တွင်ပင် AF အထောက်အကူပြုမီး မပဲပါ ရိုက်လိုသည့်အရာပေါ်တွင် ပိုပြီးတိတိကျကျ focus ပြုလုပ်နိုင်စေရန် ထည့််သွင်းထားပါသည်။ ထို့ပြင် LUMIX TZ110 သည် ပိုမိုသေးငယ်သော AF ဇုန်အတွင်းတွင် ထင်းကနဲမြင်သာမှုတန်ဖိုးကို တိတိကျကျ တွက်ချက်ခြင်းဖြင့် ညကောင်းကင်ရှိကြယ်အား အလိုအလျှောက် focus ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ရိုက်ကူးနိုင်စေရန် Starlight AF နှင့် အသစ်ပေါင်းစည်းထားပါသည်။
F2.8, 1/125 sec, ISO 125
F8.0, 1/250 sec, ISO 400
F8.0, 1/1000 sec, ISO 125
F7.1, 1/800 sec, ISO 125
F8.0, 1/800 sec, ISO 125
F8, 15 sec, ISO 125
F3.4, 1/6 sec, ISO 640
F3.5, 1/640, ISO 200
Panasonic LUMIX TZ100 ဗီဒီယို မိတ်ဆက်
Post Focus - ရိုက်ကူးပြီးနောက် အတွင်းဘက် ချိန်ညှိမှု ဧရိယာကို ရွေးချယ်ပေးပါသည်